Omby: fampahalalana ho an'ny karazana omby, omby amidy sns-BALLYA
Torohevitra hampiasa zava-mahadomelina amin'ny ombivavy be ronono
Misy karazana fanafody maromaro azo ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina sasany, fa ny iray amin'ireo no tena mety indrindra azo raisina arak'ireto lafiny manaraka ireto: ny vokatra azo sitranina tsara, tsy dia misy poizina sy vokadratsiny, vidiny ambany ary fanafody sahaza ho an'ny ombivavy be ronono. . Rehefa mampiasa zava-mahadomelina ianao dia tokony hitandrina: 1. Vakio […]
Manimba ve ny ketôn ao amin'ny ombivavy be ronono?
Ny ketosis dia miseho amin'ny ombivavy be ronono misy vokatra be loatra amin'ny fanjarian-tsakafo sy fadim-bolana. Ny aretina sy ny fahafatesan'ny zazakely dia nitombo, ary ny omby sasany dia nesorina taty aoriana taorian'ny fitsaboana lava sy aretina miverimberina. Ny ketosis omby misy ronono Pathogeny dia antsoina koa hoe ketonemia sy ketonuria. Izy io dia aretina mikraoba gliosida sy tavy […]
Tsara ho an'ny ronono ve ny famenon-tsakafo fosfor ho an'ny ombivavy be ronono?
Ny phosphore no singa miasa biolojika indrindra amin'ny mineraly rehetra. Voalohany, mandray anjara amin'ny firafitry ny taolana sy ny rafitry ny nify miaraka amin'ny kalsioma izy mba hiantohana ny fahamendrehan'ny taolana sy ny rafitry ny nify. Faharoa, mandray anjara amin'ny metabolisma angovo in vivo izy, izay ampahany tsy miankina amin'ny ATP sy ny phinefat creatine. Fahatelo, mampiroborobo ny […]
Desambra 7, 2019
Mety hisy fiantraikany amin'ny ronono ve ny fikorontanan'ny hormonina amin'ny ombivavy be ronono?
Noho ny tsy fihinanan-tsakafo sy fitantanana tsy mety, ny fivontosan'ny taovam-pananahana, ny fihenjanana sy ny sisa, ny fiasan'ny rafitra fiterahana dia tsy ara-dalàna, ny fikorontanan'ny hormonina ao amin'ny vatana dia miteraka fahasimbana amin'ny fiasan'ny omby, matetika dia mipoitra ny Corpus luteum, kista ovarian, quiescence atodinaina ary sns. NO.1 Corpus luteum maharitra Ny omby vavy dia tsy zezika aorian'ny […]
Teknika famenon-tsakafo phosforus amin'ny ombivavy be ronono
Ny phosphore no singa miasa biolojika indrindra amin'ny mineraly rehetra. Na dia ampy aza ny phosforus amin'ny sakafo mandritra ny fiompiana omby, dia aretina maro no mety hiteraka fatiora betsaka, ary miteraka tsy fifandanjan'ny tahan'ny calcium-phosphore ao amin'ny vatana. Noho izany, zava-dehibe ny manampy phosoreo amin'ny fizotran'ny […]
Desambra 3, 2019
1. Trangan-javatra niseho voalohany tany amin'ny faritra mpamokatra vary any Pakistan tamin'ny taona 1939. Taorian'izay, tany Nouvelle Zélande, Etazonia, sns. Aretina toy izany koa no notaterina tany Aostralia, Italia, India ary Japon. Raha ny tatitra voaray dia niseho tao amin'ny […]
Desambra 2, 2019
Ahoana no fomba hikarakarana fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny ombivavy be ronono?
I. Ny ombivavy mena amin'ny taona 14-18 volana na milanja 350 kg dia mety hampiakatra ny tahan'ny fiterahana ary hahazo tombony ara-toekarena bebe kokoa amin'ny fananahana ara-potoana 2-3 volana aorian'ny fiterahana. Voalohany, tandremo ny fandinihana ireo oestrus an'ny omby. Rehefa any amin'ny estrus, dia mahaliana ny fisehoana ary mikorontana ny fihetsika, ary miakatra mamakivaky […]
Inona no tokony homarihina rehefa misotro rano ny omby?
1) Ireo teknisianina miteraka ronono dia tokony hitandrina amin'ny tsy fisotro rano maloto eto an-toerana. Misy karazany roa ny rano maloto eto an-toerana. Tokony hitsaboana azy ireo amin'ny fomba hafa. Ho an'ny rano manasa vary sasany, lasopy paty, lasopy dumpling, lasopy legioma sns, raha mbola tsy marikivy izy ireo dia avelany misotro ombivavy be ronono. Ho an'ny rano fanasan'i […]
Ahoana ny fanatsarana ny fihinanana ombivavy be ronono?
Ny hakitroky ny fihinanan-kanina dia mametra ny toerana fisakafoanana sy ny toeram-pialan-tsasatra, izay manimba ny fotoana fivezivezena. Amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny omby amin'ny ronono dia mitazona fihinanana sakafo mahavelona mifanaraka amin'ny ilain'izy ireo, dia afaka miaro ny fahasalamana sy manatsara ny famokarana ronono isika. Noho izany, ny famolavolana marina sy ny sakafo avo lenta dia tena ilaina. Mampalahelo fa ny ombivavy be ronono dia tsy mahazo sanda ara-tsakafo betsaka indrindra […]
Ny antony sy ny refin'ny hafanana amin'ny ombivavy be ronono
Ny fihenjanana hafanan'ny omby vita amin'ny ronono dia manondro ny famintinana ny valiny tsy voafaritra momba ny ombivavy be ronono amin'ny tontolo iainana marobe izay tsy mahomby amin'ny toe-batana. Ny tanjony dia ny fanetsehana ny fiasan'ny vatana hiaro ny vokatra ratsy ateraky ny fanentanana amin'ny hafanana ambony ary hiantohana ny fitoniana amin'ny vatana […]
Ny tombony sy ny fampiharana ny sakafo mifangaro tanteraka ho an'ny ombivavy be ronono
1. Ny tombony azo avy amin'ny fetra mifangaro ho an'ny ombivavy be rononoNy fihinanana zavatra maina dia azo ampitomboina amin'ny alàlan'ny fampiasana fifangaroana mifangaro ho an'ny ombivavy be ronono. Ny fampiasana ny rations mifangaro tanteraka dia azo antoka fa ampy ny otrikaina ao amin'ny sakafo ary ara-dalàna ny habetsaky ny fifantohana amin'ny fikororohana, izay mety hahatonga ny omby hanana karazana maro […]
Ny vokatry ny fanjarian-tsakafo amin'ny vokatra ronono sy ny firafitry ny ombivavy be ronono
1. Karbohidraty: karbohidraty dia misy gliosidraty tsy misy fibre sy fibre. Anisan'izany, ny gliosida tsy misy fibre dia misy ny starch, siramamy ary pectin. Ny tahan'ny gliosida tsy misy fibre amin'ny sakafon'ireo ombivavy be ronono dia tokony 20% -45%. Ity faritra ity dia voafaritry ny ampahany amin'ny mifantoka amin'ny fahamendrehana amin'ny sakafo. Ho an'ny sakafo tsy dia misy ratra, dia misy gliosida tsy misy fibre tokony […]